ကကွက်ဆန်းလေး နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို ခပ်ကြမ် းကြမ်းလေး လှုပ်ပြလိုက် ပြန် တဲ့ ပုရိသ တို့ရဲ့ အသဲစွဲ ခေးကြီးလု ရဲ့ ဗီဒီယို – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ကကွက်ဆန်းလေး နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို ခပ်ကြမ် းကြမ်းလေး လှုပ်ပြလိုက် ပြန် တဲ့ ပုရိသ တို့ရဲ့ အသဲစွဲ ခေးကြီးလု ရဲ့ ဗီဒီယို
ကကွက်ဆန်းလေး နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို ခပ်ကြမ် းကြမ်းလေး လှုပ်ပြလိုက် ပြန် တဲ့ ပုရိသ တို့ရဲ့ အသဲစွဲ ခေးကြီးလု ရဲ့ ဗီဒီယို
ပုရိသ တွေကြားမှာ ရေပန်းစား နေတဲ့ ဆက်စီ မော်ဒယ်လ် မလေး လုလုအောင် ဆိုတာ ချစ်စရာ လည်းကောင်း သလို ဆွဲဆောင် မှု ညို့အားတွေ ပြည့်နေ တဲ့ သူလေးတစ် ယောက် ပါပဲနော် ။ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ လူသိ များအောင်မြင် လာခဲ့တဲ့ လုလုအောင် က ပုရိသတွေ ကြားမှာရေပန်းစား နေသူလေး လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ အနုပညာ အလုပ်တွေ ကို လုပ်ကိုင် နေတဲ့ လုလုအောင် က ကြော်ငြာ တွေလည်း လက်ခံ ရိုက်ကူး နေရတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။
လှပ လွန်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းတွေ အပြင် မျက်နှာလေး ကလည်း ချစ်စရာ ကောင်းပြီး အပြစ် ကင်းစင် လွန်းတာ ကြောင့် ပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှု ကို အပြည့် အဝရရှိ ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ခေးကြီး လုလုအောင် ကတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက် စား ဆက်ဆီ ကျကျ ပုံလေးတွေ ကို ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများဆုံး ဖော်ပြလေ့ရှိ ရာ ယောင်္ကျားလေး ပရိသတ် တွေ အများ ဆုံး တစ်ခဲနက် အားပေး ခြင်း ခံရတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
သူမရဲ့ တင်းတင်း ရင်းရင်း နဲ့ လှပ တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း တွေကြောင့် ပုရိသတွေ ကြားမှာ ရေပန်းစား နေတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမ က တော့ Photo Shooting တွေရိုက် ကူးနေ တာဖြစ်ပြီး မော်ဒယ်လ် လောက မှာလည်း အောင်မြင် မှုနဲ့ ရပ်တည် နေတဲ့ သူလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ လတ်တလော မှာလည်း Tik Tok မှာ နာမည် ကြီး နေတဲ့ ဗီဒီယို လေးကို အမိုက်စား ပြန်လည် ဆော့ပြ ထားတာ တွေ့ရပါတယ် ။ ဗီဒီယို လေးဟာ အခါခါ ပြန် ကြည့်ချင် ရလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းတာ ကြောင့် ပရိသတ်ကြီး အတွက် မျှ ဝေ ပေး လိုက် ပါ တယ် နော် … .
photo credit : Lu lu Aung facebook page
ပုရိသ ေတြၾကားမွာ ေရပန္းစား ေနတဲ့ ဆက္စီ ေမာ္ဒယ္လ္ မေလး လုလုေအာင္ ဆိုတာ ခ်စ္စရာ လည္းေကာင္း သလို ဆြဲေဆာင္ မႈ ညိဳ႕အားေတြ ျပည့္ေန တဲ့ သူေလးတစ္ ေယာက္ ပါပဲေနာ္ ။ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြနဲ႔ လူသိ မ်ားေအာင္ျမင္ လာခဲ့တဲ့ လုလုေအာင္ က ပုရိသေတြ ၾကားမွာ ေရပန္းစား ေနသူေလး လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အႏုပညာ အလုပ္ေတြ ကို လုပ္ကိုင္ ေနတဲ့ လုလုေအာင္ က ေၾကာ္ျငာ ေတြလည္း လက္ခံ ရိုက္ကူး ေနရတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။
လွပ လြန္းတဲ့ ေကာက္ေၾကာင္းေတြ အျပင္ မ်က္ႏွာေလး ကလည္း ခ်စ္စရာ ေကာင္းၿပီး အျပစ္ ကင္းစင္ လြန္းတာ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ အားေပး ဝန္းရံမႈ ကို အျပည့္ အဝရရွိ ထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ ေခးႀကီး လုလုေအာင္ ကေတာ့ သူမရဲ့ အမိုက္ စား ဆက္ဆီ က်က် ပုံေလးေတြ ကို ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတြင္ အမ်ားဆုံး ေဖာ္ျပေလ့ရွိ ရာ ေယာကၤ်ားေလး ပရိသတ္ ေတြ အမ်ားဆုံး တစ္ခဲနက္ အားေပးျခင္း ခံရတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
သူမရဲ့ တင္းတင္း ရင္းရင္း နဲ႔ လွပ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း ေတြေၾကာင့္ ပုရိသေတြ ၾကားမွာ ေရပန္းစား ေနတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမ က ေတာ့ Photo Shooting ေတြရိုက္ ကူးေန တာျဖစ္ၿပီး ေမာ္ဒယ္လ္ ေလာက မွာလည္း ေအာင္ျမင္ မႈနဲ႔ ရပ္တည္ ေနတဲ့ သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ လတ္တေလာ မွာလည္း Tik Tok မွာ နာမည္ႀကီး ေနတဲ့ ဗီဒီယို ေလးကို အမိုက္စား ျပန္လည္ ေဆာ့ၿပ ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္ ။ ဗီဒီယို ေလးဟာ အခါခါ ျပန္ၾကည့္ခ်င္ ရေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလြန္းတာ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ မၽွ ေဝ ေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ရေသူမလေး လို ရေကူးကန် ထဲမှာ အမိုက်စား ရေကူးနေ တဲ့ ချီချီလေး ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
Next post ရေစိုနေ တဲ့ ပုံအလန်းတွေ နဲ့ ရင်ခုန်သံ ကို လှုပ်နှိုး လိုက် တဲ့ “နွယ်နွယ်ထွန်း”